Yakanakisa mitambo yebhodhi yeGNU yako / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | 25/09/2021 19:24 | Linux Mitambo
Kune akawanda mabhodhi e mitambo yebhodhi. Iyi mitambo haibude muchitaira, uye iri kunakidza kugovana neshamwari dzako kana nemhuri yako pamazuva ekunaya iwayo kana iwe usingakwanise kuita zvakawandisa kunze. Zvakanaka, kana uchivada, unogona kuturika nemamwe mazita eGNU / Linux distro yako.
Saka haufanire kutenga chero bhodhi kana kutsvaga zvidimbu zvawakarasikirwa ... zvakapusa iwe unoiisa uye wotanga nekunakidzwa chero kwauri.
Mamwe a iyo yakanakisa bhodhi mitambo iyo iwe yaunogona kuwana yeLinux mahara ndeiyi:
GNU Backgammon- Iri zita ndiwo mutambo une yakapusa mitemo, uye mumwe weyakare mitambo kunze uko, asi iine zvakadzama zvinhu zve zano. Iwe hauchazoda nguva yakawandisa kuti udzidze kutamba, asi uchafanirwa kuita nhamburiko yekuvandudza, nekuti dzimwe nguva mamiriro ezvinhu akaoma anomuka. Inotambwa mukutenderera, uye mutambi wekutanga kuwana mapoinzi mashanu anokunda. Chinangwa ndechekusunungura zvidimbu zvako pamberi pemupikisi wako, uye nekuda kweizvozvo, mune zvidimbu zvidema, unofanirwa kufambira mberi wakananga kurudyi repasi (zvidimbu zvinofamba zvichienda kuruboshwe muchikamu chepamusoro woenderera mberi kubva kuruboshwe uchienda kurudyi pasi).
Kajongg: ishanduro yeKDE yemutambo wekare wechiChinese Mahjong, unodzokera kuQing Dynasty. Ndiwo mutambo une mataira akafanana neaya emadhomino, asi aine akasiyana mifananidzo. Mitemo yayo yakaoma kudzidza, asi zvinonakidza kwazvo.
PyChess: chess inoda sumo shoma, munhu wese anoziva kuti inoshanda sei. Uyu mutambo wehunyanzvi maererano nemafambiro uri zvakare mune yayo dhijitari vhezheni neiyi yekumisikidza yakaitwa nePython.
Scrabble3D- Uyu mumwe mutambo zvakare iri dhijitari vhezheni yeakakurumbira echinyakare Scrabble uye Superscrabble bhodhi mutambo. Sezvaunoziva, iwe unogona kutamba nekuisa mavara kuti ugadzire crosswords. Kusvika kune vatambi vana vanogona kutora chikamu uye kuwana mazwi anosvika kumanomwe kana masere mavara.
Katatu A: Uyu mutambo webhodhi wakakurumbira kwazvo. Izvo ndezve kuvaka humambo muRisk maitiro. Mutambo wezano maunotanga nenharaunda diki uye iwe unozotora dzimwe nyika nenyika kuburikidza nemaitiro ako. Kana iri mepu, yakavakirwa paHondo Yenyika II, Middle Earth, mepu dzinofungidzira, sainzi ngano, nezvimwe.
vamwe: kune zvimwe zvakawanda zvinonakidza zveGNOME neKDE mitambo, senge Solitaire, KReversi, ... pamwe nevamwe vakaita sePentobi, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yakanakisa mitambo yebhodhi yeGNU / Linux distro yako